♫♥✿မင်္ဂလာ၇ှိသော နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုပါတယ်♫♥✿ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ♫♥✿မင်္ဂလာ၇ှိသော နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုပါတယ်♫♥✿
Posted by ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) on Apr 14, 2013 in Buddhism | 20 comments
စေတီပုထိုးတွေမြန်မာပြည်ထက်စာရင် တော်တော်လေးကို နည်းတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ချမ်းချမ်းတို့ မြန်မာပြည်မှာဆို ခရီးသွားတိုင်း ကုသိုလ်ယူနိုင်တဲ့ ကြည်ညိုစရာ စေတိပုထိုးတွေများလွန်းလို့ နော့…
တခြားဘာကိုမှ မကိုးကွယ်ဘူး…နတ်တွေသရဲတွေကို မေတ္တာပို့ တာပဲရှိတယ်..မကိုးကွယ်ဘူး..လို့ ပြောလိုက်ရော
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မြန်မာဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်…
ပထမဦးဆုံး (၁၁.၄.၂၀၁၃) ရက်နေ့ က မွေးနေ့ အတွက်ရည်စူးပြီး ဘုရားသွားတဲ့အလျှုကို အရင်မျှပေးမယ်နော်….
ဆ၇ာတော်က မှတ်မိနေပြီ…သူတို့ ထိုင်းလူမျိူးတွေက ရွံလို့တစ်ခါမှ ကုဋီလာမဆေးဖူးပါဘူးတဲ့.
တံမျက်စည်းလှည်းပြီးတော့ ဘော်ဒါတွေကို မုန့် ကျွေးပါတယ်…
ငါးစာရောင်းတဲ့သူမ၇ှိပါဘူး ငါးစာရဲ့ တန်ဖိုးအတိုင်း အလျှုခံပုံးထဲထည့်လိုက်ယုံပဲ…
ချမ်းချမ်းပြုသမျှကုသိုလ်အဖို့ ဘာဂကို သုံးဆယ့်တစ်ဘုံအလုံးစုံသတ္တ၀ါများနဲ့ စာချစ်သူများအား အမျှပေးဝေပါတယ် ..ထပ်တူထပ်မျှ အမျှရကြပြီး ကျန်းမာချမ်းသာ ကြပါစေ..အမျှ..အမျှ..အမျှ..ယူတော်မူကြပါကုန်တော်…သာဓု..သာဓု..သာဓု…
Writen By….ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်းဖြစ်) 14.4.2013
သာဓု .. သာဓု .. သာဓု . . . . . ပါဗျာ . . .
ကျုပ်မှာတော့ . . အဲ့ဒလို မအေးချမ်း နိုင်ဘူးဗျ . . . . သူတထူး ကို ကူညီ ချင်းကလဲ . . ကိုယ့်အပူ ကိုယ် ၀ယ်ယူ သလိုပဲဗျို့  . . . .။ အားကျပါဘိတောင်း …………….။
ယိုးဒယားမတွေနဲ့ လူရော စိတ်ရောမတူချင်ပါဘူး…မြန်မာဆိုတာ ဘယ်နေရာဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် မြန်မာနဲ့ ပဲ တူတာအကောင်းဆုံးလေ…မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုကိုသာ အချစ်ဆုံး…ပါ ဦးဦး ကပ္ပိယ
သာဓု သာဓု သာဓုပါ မိန်းကလေးရေ..
မင်္ဂလာပါ ရွာသူလေးရေ ..
အဲ့ဒီ့ နေ့တွေ က ရွာသူလေး နံမည် နဲ့လိုက်အောင် စိတ် ချမ်းသာ နေမှာတော့ အမှန်ဘဲ နော်..
ဘုရားက အလှုခံပုံးတွေက ကိုယ့်ဖာသာ အလှုထည့် တာလေ ..
တစ်ခါတစ်လေ ပုံးလိုက်ပျောက်သွားတာ တစ်ခုဘဲ .. ဒါပေမဲ့ ဖြစ်တာ ရှားပါတယ် ..
တစ်ခုဘဲ သူတို့ က အလှုခံသူ မရှိဆိုတာ လူပို အလုပ်လက်မဲ့ နဲတာလို့ ထင်ပါသည်။
ချမ်းဂလေး About ရွာသူလေးချမ်းချမ်း(ရင်တွင်ဖြစ်) စာလုံးပေါင်းမှား နေတယ်ကွယ်။ မပြင်တတ်ရင် ဦးကြောင်ကြီးဆီ အကောင့်ပတ်စ်ဝက်ဒ်ကို ဂျီမေးလ်ကနေ ဓာတ်ပုံ၊ ဖုံးနံပါတ်၊ ဖေ့စ်ဘွတ်ကို ဂျီမေးအပ်ပြီး ပို့လိုက်ပါ။ ရွာမှာတော့ သိတဲ့အတိုင်း ဦးကြောင်မပါရင် မပြီး.. ဝမ်းချုပ်နေကြတယ်လေ..။
ကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုချင်စိတ်လေးနဲ့ မွန်မြတ်လှတဲ့ နှလုံးသားလေးနဲ့
ဖုန်းနံပါတ်လေးဘာလေးပေးပါလား….. ဖရီးရတဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းလေးဘာလေးဆက်လို့ရတာပေါ့………….
ဝင်ဝင်ချင်း ဆောက်နဲ့ထွင်း မဟုတ်ဘူးးး
ဝင်ဝင်ချင်း ကုသိုလ်တွေနဲ့ ခင်းကျင်းလာသပေါ့ …
ရုပ်ကလေးက အချောလေးပဲဗျ ….
ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြော ခုလို ဘုရားတရား ကြည်ညိုပြီး
သနားဂရုဏာတွေ ရှိတဲ့ မိန်းကလေးမျိုးဆို ကျုပ်တော့ဖြင့် အလွန် ချစ်တတ်သဗျ …
အခု ချမ်း လေးကိုလည်း ချစ်မယ်နော့ ….
တစ်ယောက်နဲ့ အဆင်မပြေဘူး ..
ရှေ့လာမယ့် အနာဂါတ် အစီအစဉ်တွေထဲမှာလည်း
ဗူးမယ့် အစီအစဉ်တွေ အပြည့်ပဲ .. ဟဲဟဲ ..
ဒီတစ်သက်မှာ တစ်ယောက်တည်းပေါ့ …
အဲ့လို .. အဲ့လို ..
ဟေ့လူ.. မျက်နှာခြောက်ဖက်.. ချမ်းလေးဂို.. မထိနဲ့.. ထိနဲ့..
ကိုရင်က ချမ်းလေးနဲ့ ဒါနတူတူပြုချင်လို့.. ပါရမီဖြည့်ချင်လို့.. ခုထဲက
ဘန်ကောက်ကို လေယာဉ်လက်မှတ်ကြိုဖျက်ပီးဘီ.. :cool:
အဲ့လိုနေရာတွေများ တွေ့ကို တွေ့ဖူးဘူး..
ဒီတခေါက် ချမ်းလေးကို ရှာရတော့မယ် အထင့်ရယ်..
ချမ်းလေးကို ရှာဂျင်ရင် …
ကျုပ်ဆီကို လာမှ ရမယ် ကရင်စီ …
ချမ်းလေးက ကျုပ် ဟိုဒင်းကြီး ထဲမှာရောက်နေဘီဂျ ..
ခညားဒေါ့ နောက်ကျ အပေါက်ဝ ဖစ်တွားဘီ …
ကိုအံစာတုံးက ကဗျာဆရာထင်တယ် ကဗျာချစ်တဲ့သူတွေဟာ စိတ်ထားနူးညံ့ပြီးအပြောအဆို သိမ်မွေ့ တာများတယ် အခု ကိုအံစာတုံး စကားလုံးတွေက ကဗျာမဆန်ပဲ အပေါစားဆန်ပါတယ်. မိန်းကလေးတွေကို ညီမလို နှမလို စာနာစိတ် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ထားရင် အပြောအဆိုလေးသတိထားပါ **** မဟာရာဇာ အံစာတုံး says:
ခညားဒေါ့ နောက်ကျ အပေါက်ဝ ဖစ်တွားဘီ … ****
ပို့စ်ပိုင်ရှင် မချမ်းချမ်းရေ …
ကျုပ် စနောက်မိတာ လွန်သလို ဖြစ်သွားပါတယ် …
ဒီအတွက် ကျုပ်က တောင်းပန်ပါတယ်နော့ …
ပြီးတော့ ကျုပ်က ကဗျာဆရာ မဟုတ်ပါဘူး …
ဒီတော့ အပြောအဆို ((အရေးအသား)) က ထင်သလောက် မနူးညံ့ပါဘူး …
ပြီးတော့ ကျုပ်မှာ နှမလေးတွေ ရှိပါတယ် …
ဒီတော့ မိန်းကလေးတွေ အပေါ်မှာ နှမချင်း ကိုယ်ချင်း စာနာတဲ့စိတ် အပြည့်ရှိပါတယ် …
အခု မချမ်းချမ်း ကို ပြောလိုက်တယ် ဆိုတာကလည်း
နှမချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ ပြောလိုက်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး …
ဥပမာ အနေနဲ့ ပြောပြပါမယ် …။
ကျနော်တို့ လမ်းတွေ လျှောက်သွားကြတယ် …
ပုရွက်ဆိတ် လို အကောင်ငယ်လေးတွေဟာ မြေကြီးပေါ်မှာ ကျက်စားကြတယ် …
ဒီအခါ မတော်တဆ ဆိုသလို လမ်းလျှောက်သွားရင်းနဲ့
ပုရွက်ဆိတ် လို အကောင်ငယ်လေးတွေကို တက်နင်းမိ၊ သတ်မိမှာပါပဲ …
ဒါပေမယ့် ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ …
ကျနော်တို့ အနေနဲ့ သေစေလိုတဲ့ စေတနာ တစ်ပြားမှ မပါသလို
ကျနော်တို့ကြောင့် သေသွားတယ်ဆိုတာကို သိရင်တောင် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိဦးမှာပါ ..။
အခုလည်း ဒီသဘောတရားပါပဲ ….။
ကျနော့် အနေနဲ့ မချမ်းချမ်း ကို နှမချင်း ကိုယ်ချင်းမစာ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး …
စ နောက် နေရင်းနဲ့ အများအမြင်မှာ မတင့်တယ်သလို ဖြစ်သွားတာပါ …
ဒီအတွက် ကျုပ်က မချမ်းချမ်း ကို တောင်းပန်ပါတယ်နော့ …
ပြုသမျှ ကုသိုလ်တွေကို အမျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓုပါ နော်။
အိမ်သာဆေးတာ တော်ရုံမလုပ်နိုင်တာမို့ ချီးကျူးပါတယ် သမီးရေ။
ချမ်းချမ်းပြုပြုသမျှ ကုသိုလ်အစုစုကို သာဓုခေါ်ပါတယ်နော်… သာဓု..သာဓု..သာဓု….